Donald Tusk: “Qaxootigoow fadlan ha isku imaan Yurub” - Gaaloos.com ≡Navigasi Menu
Home → News → Wararka
→ Donald Tusk: “Qaxootigoow fadlan ha isku imaan Yurub”
Donald Tusk: “Qaxootigoow fadlan ha isku imaan Yurub”
Madaxweynaha Golaha Midowga Yurub Donald Tusk ayaa baaq u direy dhamaan, kuwa nolosha iyo dhaqaalaha u soo doonta Yurub ee ku riyoonaya in ay nolol cusub ka samaystaan Yurub, waxana uu ku yiri HA ISKU IMAANINA YURUB.
– Waan idiin digayaa, meel kasta oo aad ka imaanaysaan: Haddaba ha isku imaanina Yurub. Ha rumeysanina Mukhalasiinta. Naftiina khatar ha soo gelina, lacagtiina ha iska khasarina. Ma jirto wax qiime ah oo idinka soo horeeya. Ha ahaato Giriiga ama dal kale oo Yurub ah, Giriigu ma haanayo meel aad Taransit ku soo martaan, sidaas waxaa yiri Madaxweynaha Golaha Midowga Yurub Mr. Donald Tusk, mar uu shir saxaafadeed la qabanayey Raysalwasaaraha dalka Giriiga Alexis Tsipras magaalada Athens, maanta oo khamiis ah.
Sanadkan bilowga ah waxaa dalka Giriiga soo gaarey 110 000, kuwaas o doonaya in ay u soo gudbaan dalalka Galbeedka iyo Waqooyiga Yurub.
hadalka ka soo baxay Donald Tusk ayaa imaanaya iyada oo kumaankun qaxooti ah ay ku xaniban yihiin xuduudka Makadooniya iyo Giriiga.
Mr.Tusk ayaa sheegay in ay si dhaw ula shaqeynayaan dalka Turkiga si loo joojiyo qul-qulka qaxootiga.
Sanadkii 2015 ayaa Midowga Yurub u ahaa sanad ay dharbaaxo xoogleh ka soo gaartey qaxootiga sida quraanjada u yaacaya ee dhinackasta uga soo degay.
Dalal badan oo ka mid ah Midowga Yurub ayaa si adag albaabkooda u xirtey, dalalka qaarkood waxayba silig ku xireen xuduudkooda, halka Dalalka Waqooyigu ay bilabeen in aan la safri karin baasaboor la’aan, taas oo muujineysa digniinta ka soo yeertey Donald Tusk.